TTSweet: မုန့်ဟင်းခါးတော့ မုန့်ဟင်းခါး ...
Posted by T T Sweet at 11:48 AM
rose of sharon September 9, 2012 at 5:38 PM
ကြိုက်တယ်... အကုန်လုံး... ဝက်သားဓညင်းသီးချက်နဲ့ ချဉ်ပေါင်ကြော်အကြိုက်ဆုံး
အထုတ်ချက်လဲ ကောင်းပါတယ် တီဆွိရေ.. ရောက်ခါစတော. မစားတတ်ဘူးပေါ... ကျမတော. ဆီနဲနဲထည်.ပြီး ကြက်သွန်ဖြူ ဂျင်းနဲနဲထောင်းပြီး ဆနွမ်းလေး ငရုတ်သီးအရောင်မှုန်.နဲနဲ ထည်.ပြီး သူ.ငါးဆီသတ်ကို ဆီထပ်သတ်လိုက်တယ် ပြီးမှ ရေထည်.ပြီး အမှုန်.တွေဖောက်ထည်.တာ.. သူ.ပရိုဆီဂျာလို လိုက်မလုပ်ဘူး မွှေးအောင်လို.လေ
siu mai လုပ်နည်းလေး တင်ပါဦးနော်
မုန့်ဟင်းရည်အိုးထဲ ကုလားပဲဟင်းရောမိတဲ့ကိစ္စကတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမှာပဲနော်။ ကျနော်လဲ မုန့်ဟင်းခါးကို အထုပ်ကိုပဲချက်တက်တယ်။ တခါတလေစိတ်ပါ၇င်တော့ ငါးအသားဆီသတ်ထားတာပါ ရောထည့်တာပေါ့။ ၀က်သားဒညင်းသီးဟင်းလေး ပန်းကန်လိုက်မသွားပါတယ်။
မမိုး September 9, 2012 at 7:03 PM
ချဉ်ပေါင်၊ ပုဇွန်ကြော်............... ၀က်သား ဒညင်းသီး............
ဒီမှာ... ချဉ်ပေါင်လဲမရ၊ ဒညင်းသီးမရှိ...
ကံကိုပဲ ယိုးမယ်ဖွဲ့ရတော့မယ် ထင်ရဲ့ တီဆွီရေ..
Khaing Thazin September 9, 2012 at 11:57 PM
မုန့်ဟင်းခါး အိုးထဲ ကုလားပဲဟင်း ရောတာတော့ ဖတ်ရတာတင်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ ကိုယ်ကိုတိုင်ဆို မျက်ရည်တောင်လည်မိမယ်ထင်တယ်။း(
ဒါနဲ့ .... Bonus က ဟင်းတွေကတော့ ရှယ်ပဲရှယ်ပဲး)))
San San Htun September 10, 2012 at 1:09 AM
တီဆွိလက်ရာ မစားရတာတောင် ကြာပြီ...စားလို့ ကောင်းမှာ သေချာတယ်ဗျ..
Most of the ready made MonHinGar are salty (my opinion). What brand u tried?
ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို ရောမိလဲ
အသိသာကြီးကို မုန့် ဟင်းခါးနံ့နဲ့ပဲကုလားဟင်းနဲ့တူမှမတူဘဲ
T T Sweet September 10, 2012 at 4:03 PM
အောက်ကအိုးကို သေချာမကြည့်ပဲ ရောလိုက်တာဖြစ်မယ်။ ပြောခဲ့သလို အကျိုးအကြောင်းဘာမှ မသိပါဘူးဗျာရေ။
နန်းသပြေတဲ့ အပေါ်မှာ ပုံလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ငံတော့ သိပ်မငံပါဘူး။ အတော်ပဲ။ ငါးတွေ ရေတွေ ရောတာများလိ်ု့လားမသိ။ ငါးတစ်မျိုးမျိုးကို ပြုတ်ထည့် အချိုလေး လေးသွားရော။ အထုပ် လတ်လို့လားမသိ၊ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ အချိုမှုန့်တောင် မပါဘူးတဲ့ဗျာ။ ကြက်သားမှုန့်တော့ ပါမလား မသိး)
ဖတ်ရတဲ.သူတောင် “နင်”တယ်။ ပထမတော. “ သမီးလေး ကြိုပြီးပြန်ရောက်တော့ လူတွေမျက်နှာကြည့်ရတာ တစ်မျိုးပေါ့။ ကိုယ့်ကိုပဲ ဦးစားပေးသလိုလို၊ အားပဲနာနေသလိုလိုပေါ့။ ကိုယ့်မုန့်ဟင်းခါးအိုးတော့ မတွေ့တော့ပြီ။ ” လို.ရေးထားတာဖတ်ရင်းနဲ.၊ “ဒုတ်ခဘဲ၊ မုန်.ဟင်းခါးမှောက်သွားတာလား၊ သိုးကုန်လို.လား၊” စိတ်ထဲထင်နေတာ၊ဘယ်ဟုတ်လိမ်.မလဲ၊ ပဲကုလားဟင်းနဲ.ရောမိလို. အကုန်သွန်ပစ်လိုက်ရတယ်တဲ.၊ အံ.သြရော။
လုပ်မိသူကလဲ တီဆွိရောက်ရောက်ချင်း အကျိုးအကြောင်းလာမပြောဘူး၊တမျိုးဘဲနော်။
အားတော.နာပါတယ်။ chicken pop corn ကြော်နည်းလေး အဆင်ပြေတဲ.အချိန်ရေးပေးပါနော်
I tried 'Nan Tha Pyay' but the taste is not consistant. It depends on the betch.
စန္ဒကူး September 11, 2012 at 1:53 PM
chicken pop corn လုပ်နည်းမေးထားတာလေ မရေးပေးနဲ.တော.နော်၊ youtube ထဲမှာဘဲ လုပ်နည်းကြည်.လိုက်တော.တယ်။ အားနာလို. ရေးပေးခိုင်းရမှာလေ။
T T Sweet September 12, 2012 at 12:40 PM
နောက်တစ်ခါ ကြော်ရင် အတိုင်းအတာတွေ သေချာမှတ်ထားပြီး ရေးပေးပါ့မယ်။ ရေးမလို့ စိတ်ကူးနေတာ ကြာပြီ။ အဲ့ အနောနိမတ်စ်က အရမ်းအားနာတတ်ပုံရတယ်။ ဘယ်တူလဲ တိဘူးနော်။
T T Sweet September 12, 2012 at 6:58 PM
4:37 AM (14 hours ago)
Anonymous has leftanew comment on your post "မုန့်ဟင်းခါးတော့ မုန့်ဟင်းခါး ...":
သူတို့ တီဆွီကို မပြောရဲတာက အပင်ပန်းခံ ချက်လာတဲ့ အလှူရှင် စိတ်ဆိုးမှာလဲစိုး၊ မျက်နှာလဲပူနဲ့ ဘယ်ကစ, ပြောရမှန်းမသိ၊ ပြောရဲတဲ့ သူရဲကောင်းလဲမရှိ ဖြစ်နေတာ ထင်ပါတယ်။ ပြောချင်တဲ့သူတွေကလဲ သူတို့ပြောလိုက်လို့ ပဲဟင်းလောင်းထည့်မိတဲ့သူကို တီဆွီ စိတ်ဆိုးရင် သူတို့ပါ ကြားက မျက်နှာမထားတတ် ဖြစ်မှာစိုးလို့ ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်သာ အဲဒီနေရာမှာ ရှိနေရင်လဲ မုန့်ဟင်းခါးအလှူရှင်ကို ဘယ်လို ပြောလိုက်ရမှန်းမသိနဲ့ အဲဒီလိုပဲ ဘေးကနေကြည့်ပြီး မြုံစိစိ ဖြစ်နေမှာပဲ။ ကာယကံရှင်ကလဲ မပြောရက်၊ ဘေးလူတွေကလဲ ပြောရမှာအားနာ ဖြစ်နေပုံ ရပါတယ်။ မုန့်ဟင်းခါး ချက်လာရတယ်ဆိုတာ အရမ်းလက်ဝင်မှန်း မြန်မာလူမျိုးတိုင်း သိတာကိုး။
မုန့်ဟင်းခါးဟင်းရည်နဲ့ ပဲကုလားဟင်းအရောနဲ့ မုန့်ဖက်နဲ့ စားရင် ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူးနော်။း)
တန်ခူး September 23, 2012 at 2:33 AM
အထုတ်ချက်လဲ တို့ သူငယ်ချင်းလက်ရာကို ယုံပြီးသားပါ. ဟင်းလေးတွေကြည့်ပြီး မနက်ဖြန်ဈေးဝယ်ဖို့ အကြံရသွားပြီဆွိရေ